PressReader - Isolezwe: 2018-07-16 - UZazini uzuzele izwe igolide
UZazini uzuzele izwe igolide
Isolezwe - 2018-07-16 - EZEMIDLALO - LUNGILE MAJOKA
UMGIJIMI osemncane uSokwakhana Zazini akazange aphoxe enza njengoba bekulindelekile etholela iNingizimu Afrika indondo yegolide kwi-IAAF Under 20 World Championship esongwe izolo eTampere, eFinland.
UZazini (18) ukhiphe wonke amangwevu anawo eyogqashula intambo kuqala kowamanqamu we-400mH.
Ubethwalise kanzima wumgijimi waseQatar, uBassam Hemedia, ongene endaweni yesibili no-Alison Dos Santos waseJamaica olale isithathu.
“Umqhudelwano bewunzima kakhulu kodwa ngijabule kakhulu. Ngiyaziqhenya ngengizenzele kona nezwe lami,” kusho uZazini kwi-website ye-IAAF.
Ngaphambi kowamanqamu ubevumile ukuthi unayo ingcindezi yokwenza kahle.
“Ikhona ingcindezi kodwa ngisebenzisa yona ukukwakha ukuzethemba. Lowo mfutho yiwona engizowusebenzisela ukuziphusha ukuze izimbangi zingasondeli eduze kwami,” kusho uZazini.
Ubefike emqhudelwaneni eshayela phezulu ngemuva kokuzibeka emehlweni omhlaba edla isicoco kwi-IAAF Under 18 Champions eNairobi nyakanye.
Kulo nyaka ubesanda kugijima isikhathi esingaphansi kwemizuzuzwana ewu-50. NgoMgqibelo ebusuku unqobe ngo-49:42. Izolo, obekuwusuku lokusongwa kwemidlalo, elaseNingizimu Afrika belisahleli endaweni yesine ohlwini lwezindondo.
Abanye abahambe phambili nguKylie Blignaut othole igolide kwi-shot put. UZeney van de Walt uphume endaweni yokuqala kwi-400mH wamantombazane kwathi uBreyton Poole wathola ithusi kwi-high jump.
Khonamanjalo, umdlali we-javelin, uSunette Viljoen, uphakamisele ifulegi lakuleli phezulu eba ngumpetha we-Athletics World Cup ngokuphonsa ibanga elingu-61.69.
Ukuthola kwakhe igolide kwengeze amaphuzu ayisishiyagalombili emgodleni weNingizimu Afrika ogcine unawu-73 ngosuku lokuqala ngoMgqibelo ebusuku.
Abanye abafake amaphuzu uLuxolo Adams othole indawo yesibili kwi-200m, uVictor Hogan, olale isibili kwi-discus, uCarina Horn ongene endaweni yesithathu kwi-100m neqembu le-4X100m labesilisa elingene endaweni yesithathu.
I-Athletics World Cup kungokokuqala iba khona. Idlalwa ngamazwe ayisishiyagalombili akleliswa phezulu ngokwezindodo kwi-IAAF World Championship ayeseLondon nyakenye. Izwe okuphele izolo ebusuku liqoqe amaphuzu amaningi lizothola inkomishi nemali elinganiselwa ku-R26 million.